Shirkii Amniga Qaranka oo Muqdisho Lagu soo Gaba-Gabeeyey.
February 11, 2018 - Written by Suldaan Samawade
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 10-february-2018 uga qayb galay soo xiritaanka shirka amniga qaranka oo muqdisho ka socdey 6 – 10 february, shirkaas oo ka dhacay xaruunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Ugu horrayntii shirkaan wuxuu soo dhaweeyey Gudoomiyaha cusub gobolka banaadir, shirkaan wuxuu dabo socdey shirarkii joogtada ahaa ee golaha amniga qaranku yeelan jiray, goluhu wuxuu bogaadinayaa booqashadii taariikhiga ahayd ee uu madaxweynaha jamhuuriyada fedaralka Soomaaliya ku maray gobolada dalka, gaar ahaan deegaanadda Puntland.
Shirkaan waxaa diiradda lagu saaray qodobadda soo socda.
1. Arimaha Amniga Qaranka
2. tubta siyaasadda loo dhan yahay 2020
3. qeybsiga khayraadka dalka ( khaasatan kalluunka )
1. Aminga Qaranka
Goluhu markii uu dhegaystay talooyinkii ay soo jeedyeen guddiga farsamada Amniga qaranka, tixgeliyeenna aragtiyaha talooyinka ku saabsan amniga dalka,goluhu waxay isku raaceen qodobada hoos ku xusan
1.1 in Dawladdaha xubnaha DFS dar-dargaliyaan daraasaynta tirada iyi tayada ciidamada booliskooda oo ay ka mid yihiin daraawiishtu, kadibna la isku dhafo si waafaqsan hanaanka booliisaynta cusub ( New Policing Model ) iyo qaab dhismeedka amniga qaranka.
1.2 dawladda fedaraalku waxay ka caawinaysaa ciidamada booliska dawladaha xubnaha ka ah oo ay ku jiraan daraawiishta, ( Hub, Saanad, Agab ciidan, Raashin, Dawo, Gunno, Tababar iyo tayayn ), ee ay kala qayb qaadan doonan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed howgalada ciidan ee lagula dagaalamayo argagixisada.
1.3 ciidamada booliska dawladaha xubnaha ka ah dawladda fedaralku oo ay ku jiraan daraawiishtu waxay ka mid yihiin ciidanka booliiska soomaaliyeed ee hoos yimaada kana hawlgala heer maamul, waxayna ka qayb qaadanayaan hawlgalada ciidan ee wadanka lagu xoraynayo ayagoo kaligood ah ama kaashanaya ciidamada xoogga dalka.
1.4 in la magacaabo lana hawlgaliyo guddiga isku dhafka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed,iyo Amison.
1.5 Guddiga farsamada ee amniga qaranka oo ka kooban heer fedaraal iyo mid gobol waxaa la go,aamiyey in ay kulmaan saddexdii asbuucba hal mar,waxay xog dhamaystiran la wadaagayaan Madaxweynaha JFS iyo Madaxdooda.
1.6 in xafiiska amniga qaranku qorsheeyo uuna helo miisaaniyad lagu hawl-galiyo xafiisyada amniga qaranka ee Dawladaha xubnaha ka ah DFS.
1.7 in la dadajiyo dhamaystirka ciidamada DANAB sida ku xusan qaab-dhismeedka amniga qaranka, ciidamada danab waa is la iskugu dhafaa si heer qaran ka hor tababarka.
2. Arimaha Siyaasadda
2.1 waxay xukuumadda fedaraalku soo bandhigtay qorshaha tubta siyaadda ee loo dhan-yahay ee 2020, taasoo dood dheer iyo falanqayn ka dib la isla gartay in ay fulinteeda kawada qayb qaataan dawladda federaalka iyo dawladaha xubanaha ka ah iyo gobolka banaadir.
2.2 waxaa lagu heshiiyey in la magacaabo guddi farsamo oo ka kooban ( 10 ) xubnood oo ka soo talo bixin doona arimaha federaalka , ra’isul wasaraha ayaa si rasmi ah wareegto ugu soo saari doona xubnaha guddiga farsamo iyo waajibaadkooda.
2.3 ayado la tixgalinayo shaqada baaxadda leh ee ay soo qabatay wasaarada arimaha gudaha, federaalka iyo dib u heshiisiinta, ee arimaha sharciga doorashooyinka ee lagama maar-maanka u ah taabagalinta doorashooyinka qof iyo cod ee 2020ka, waxaa gudiyada farsamada la farayaa inay si dhakhso ah usoo gudbiyaan nidaam doorasho oo dalku qaadanayo muddo aan ka badnayn afar ( 4 ) todobaad.
2.4 Shirku wuxuu soo dhaweeyey isla markaana bogaadiyey horumarka laga gaaray arimaha wadatashiga doorashooyinka ee guddiga madaxa-banaan ee doorashooyinku ka sameeyey qaybo badan oo goboladda iyo degmooyinka dalka ka mid ah.
2.5 waxaa la isku raacay in guddiga madaxa-banaan ee doorashooyinku soo dhamaystiro deegaanadda uga dhiman wadatashiga dadweynaha ee arimaha doorashooyinka.
2.6 Shir-weynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedaha qabsoomida doorasho hal qof iyo hal cod ah ee 2020 sida loogu talo galay, sidaa darteedna waxaa lagama maam-maan ah in guddiga doorashooyinka la siiyo tageerada ay u baahan yihiin siyaasad iyo dhaqaalo ahaanba.
2.7 Markay madaxdu dhageysatay warbixintii wasiirka wasaaradda dastuurka uu ku faahfaahiyey hormarka laga sameeyey tubta dib-u eegista dastuurka ku-meel gaarka ah,waxaa la isla qaatay in hawlaha dib- u eegidsta lagu soo gabogabeeyo sanadka 2018, iyadoo qodobada dib-u eegista loo kala hormarinayo sida ay u kala muhiimsan yihiin.
3 Arimaha wadaagista khayraadka
3.1 Markii shirku dhegaystay war-bixintii wasiirka wasaarada kalluumaysiga iyo khayraadka badda lana tixgaliyey baahida deg-degga ah ee loo qabo ka faa’iidaysiga khayraadka badda, waxaa la isla qaatay in la saxiixo heshiis ku meel gaar ah oo ku saabsan qaybsiga dakhliga ka soo xaroodo kalluumaysiga inta laga soo dhamaystirayo heshiiska guud ee qaybsiga khayraadka badda.
Madaxda qaranku waxay isku raaceen in shirka soo socda lagu qabto magaalada baydhabo 28-maarso 2018 loogana heshiiyo qaybsiga khayraadka oo dhammaystiran, iyo hannaanka doorasho ee dalku qaadanyo sannadka 2020, madaxda qaranku waxay kaloo isku raaceen in la dardar galiyo go’oon ka gaarista arimaha masiiriga ah ee horyaala sida, awood qaybsiga, hannaanka garsoorka federaaliga ah, midaybta hannaanka dakhliga, nidaamka dawladdeed ee dalku yeelanayo iyo maqaanka caasimada Muqdisho.